SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Bambara Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiKalanga (ChekuBotswana) ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Jamaican Creole Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mari Mauritian Creole Maya Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Ronga Russian Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mwari Ane Mazita Mangani?
Mwari angori nezita rimwe chete. MuchiHebheru rinonyorwa kuti יהוה uye muchiShona rinonzi “Jehovha.” * Achishandisa muprofita wake Isaya, Mwari akati: “Ndini Jehovha. Ndiro zita rangu.” (Isaya 42:8) Zita iri rinowanika ka7 000 muzvinyorwa zveBhaibheri zvekare. Rinowanika kakawanda kupfuura mamwe mazita ese ekuremekedza aMwari uye kupfuura chero zita raani zvake anotaurwa muBhaibheri. *
Mwari ane mamwe mazita here?
Kunyange zvazvo Bhaibheri richiti Mwari ane zita rimwe chete, rinoshandisawo mamwe mazita akawanda pakumuremekedza uye pakutsanangura zvaari. Mamwe emazita iwayo anotevera netsanangudzo zvinoratidza chimwe chinhu nezvaJehovha kana kuti zvaari.
Zita rechiArabic rekuti “Allah” harisi zita chairo asi nderekuremekedza rinoreva kuti “Mwari.” Shanduro dzemaBhaibheri echiArabic neemimwewo mitauro dzinoshandisa “Allah” panzvimbo perekuti “Mwari.”
Hapana ane simba rakaenzana nerake. Zita rechiHebheru rekuti ʼEl Shad·daiʹ, kureva kuti “Mwari Wemasimbaose,” rinowanika muBhaibheri ka7.
Zvakazarurwa 1:8; 21:6; 22:13
“Wekutanga newekupedzisira,“ kana kuti “mavambo nemagumo,“ kureva kuti hapana kumbova nemumwe Mwari Wemasimbaose kunze kwaJehovha uye hakuzombovi nemumwe kunze kwake. (Isaya 43:10) Arufa ibhii rekutanga paarufabheti yechiGiriki uye Omega ibhii rekupedzisira.
Dhanieri 7:9, 13, 22
Haana mavambo; akagara aripo pasati patombova naani zvake kana kuti chero chii zvacho.​—Pisarema 90:2.
Ndiye akaita kuti zvinhu zvese zvivepo.
Ndiye anopa upenyu.
Ane simba guru uye ndiye anofanira kunamatwa. Shoko rechiHebheru rekuti ʼElo·himʹ riri muuwandu, kuratidza ukuru hwaJehovha, chiremerera uye kunaka kwake.
Ndiye Mwari mukuru, akasiyana “navanamwari vasina zvavanobatsira” vanonamatwa nevamwe.​—Isaya 2:8.
Isaya 30:20, 21
Anotidzidzisa kuti tibatsirwe uye anotitungamirira.​—Isaya 48:17, 18.
Ndiye akaita kuti zvinhu zvese zvivepo.​—Zvakazarurwa 4:11.
1 Timoti 1:11
Anogara achifara.​—Pisarema 104:31.
Anonzwa munyengetero wemunhu mumwe nemumwe anonyengetera kwaari aine kutenda.
Ndiri Iye Wandiri
Eksodho 3:14, Bhaibheri Rine Apokirifa
Anova chero zvaanoda kuti azadzise chinangwa chake. Chirevo ichocho chinoshandurwawo kuti “Ndichava Wandichava” kana kuti “Ndichava Zvandinenge Ndasarudza.” (Bhaibheri Dzvene; Bhaibheri​—Shanduro yeNyika Itsva) Mashoko iwayo anotibatsira kuti tinzwisise zvinorehwa nezita raMwari rekuti Jehovha, rinozotaurwa muvhesi inotevera.​—Eksodho 3:15.
Joshua 24:19, Bhaibheri Dzvene
Anoda kunamatwa iye ega. Shoko iri rakashandurwawo kuti “anoda kuzvipira kwakazara.”Bhaibheri​—Shanduro yeNyika Itsva.
Kutonga kwake hakuna mavambo kana magumo.
Muridzi kana kuti Tenzi; muchiHebheru ʼA·dhohnʹ kana kuti ʼAdho·nimʹ.
Isaya 1:9, Bhaibheri Rine Apokirifa
Mutungamiriri wemauto engirozi kana kuti “Jehovha wemauto.”​—VaRoma 9:29
Ane nzvimbo yepamusorosoro.
Mutsvene (akachena patsika) kupfuura chero munhu upi zvake.
Ane simba pamusoro pemunhu mumwe nemumwe uye pemarudzi, sezvakangoita muumbi ane simba pamusoro peivhu raanoshandisa pakuumba.​—VaRoma 9:20, 21.
Anodzikinura kana kuti anotenga vanhu kubva muchivi nerufu achishandisa chibayiro cherudzikinuro chaJesu Kristu.​—Johani 3:16.
Pisarema 18:2, 46
Ndiye nzvimbo yakachengeteka yekutizira uye ndiye muponesi.
Anonunura kubva pazvinhu zvinokuvadza kana kuparadza.
Ane hanya nevanamati vake.
Ane simba guru; muchiHebheru ʼAdho·naiʹ.
Dhanieri 7:18, 27
Mazita enzvimbo ari muMagwaro echiHebheru
MuBhaibheri mune mamwe mazita enzvimbo ane zita raMwari, asi hazvirevi kuti ndemamwe mazita aMwari.
Genesisi 22:13, 14
“Jehovha achapa zvinenge zvichidiwa”
“Jehovha ndiye Mureza wangu.” Jehovha ndiMwari anodzivirira uye anobatsira vanhu vake.​—Eksodho 17:13-16.
Vatongi 6:23, 24
Nei tichifanira kuziva uye kushandisa zita raMwari?
Mwari anoona zita rake rekuti Jehovha serinokosha nekuti akaita kuti rinyorwe kane zviuru muBhaibheri.​—Maraki 1:11.
Mwanakomana waMwari Jesu, akasimbisa asimbisazve kukosha kwezita raMwari. Semuenzaniso, akanyengetera kuna Jehovha achiti: “Zita renyu ngaritsveneswe.”​—Mateu 6:9; Johani 17:6.
Vaya vanosvika pakuziva zita raMwari vorishandisa, vanenge vachitora matanho ekutanga pakuumba ushamwari naJehovha. (Pisarema 9:10; Maraki 3:16) Ushamwari ihwohwo hunoita kuti vabatsirwe nevimbiso iyi yaMwari yekuti: “Nekuti anondida, ndichamununura. Ndichamudzivirira nekuti anoziva zita rangu.“​—Pisarema 91:14.
Bhaibheri rinoti: “Variko vanonzi ‘vanamwari,’ kungava kudenga kana panyika, sezvo kuine ‘vanamwari’ vakawanda uye‘madzishe’ akawanda.” (1 VaKorinde 8:5, 6) Asi rinonyatsotaura nezvaMwari mumwe chete wechokwadi nezita rake rekuti Jehovha.​—Pisarema 83:18.
^ ndima 1 Dzimwe nyanzvi dzechiHebheru dzinofarira kushevedza Mwari nezita rekuti “Yahweh”.
^ ndima 1 Zita raMwari rakapfupikiswa kuti “Jah,” rinowanika kanenge ka50 muBhaibheri, kusanganisira kushandiswa kwarinoitwa mushoko rekuti “Hareruya,” izvo zvinoreva kuti “Rumbidzai Jah.”​—Zvakazarurwa 19:1; Bhaibheri Dzvene.
Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa dzidziso youtatu. Idzidziso yemuBhaibheri here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mwari Ane Mazita Mangani?
ijwbq nyaya 125